Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Gbanyụọ maka NASA SpaceX Crew-3
Ụgbọ elu Crew-3 ga-ebu ndị na-enyocha mbara igwe NASA Raja Chari, ọchịagha ozi; Tom Marshburn, onye ọkwọ ụgbọ elu; na Kayla Barron, ọkachamara na ozi; yana ESA (European Space Agency) onye na-enyocha mbara igwe Matthias Maurer, onye ga-eje ozi dị ka onye ọrụ ozi, na ọdụ oghere maka ọrụ sayensị ọnwa isii.
NASA ga-enye mkpuchi maka mmalite mmalite na mmalite mmalite maka ọrụ SpaceX Crew-3 nke ụlọ ọrụ ahụ na ndị na-enyocha mbara igwe na International Space Station. Nke a bụ njem ntụgharị nke ndị ọrụ nke atọ ya na ndị na-enyocha mbara igwe na SpaceX Crew Dragọn na ụgbọ elu nke anọ nwere ndị astronauts, gụnyere ụgbọ elu nnwale Demo-2, dịka akụkụ nke Mmemme Ndị Ọrụ Azụmahịa nke ụlọ ọrụ.
Ebumnuche a bụ maka elekere 2:21 nke ụtụtụ EDT Sọnde, Ọktọba 31, na rọketi SpaceX Falcon 9 sitere na Launch Complex 39A na NASA's Kennedy Space Center dị na Florida. Emebere Crew Dragon Endurance ka ọ banye n'ọdụ ụgbọ elu na 12:10 n'ụtụtụ Mọnde, Nọvemba 1. Malite mmemme, mmalite, na mbupu ga -adị na telivishọn NASA, ngwa NASA, na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ.
Oge ngwụcha agabigala maka nzere mgbasa ozi maka mkpuchi onwe onye nke mwepụta a. Ozi ndị ọzọ gbasara nzere mgbasa ozi dị site na email: [email protected]
Ntinye mgbasa ozi niile na nnọkọ akụkọ ndị a ga-adịpụrụ adịpụ ma e wezụga ebe edepụtara aha n'okpuru ebe a, yana naanị ọnụọgụ mgbasa ozi pere mpe ka a ga-anabata na Kennedy n'ihi ọrịa na-efe efe na-aga n'ihu nke coronavirus (COVID-19). Biko rịba ama na akụrụngwa saịtị Kennedy Press ga -anọgide na -emechi n'oge mmemme ndị a maka nchekwa nke ndị ọrụ Kennedy na ndị nta akụkọ, ewezuga ọnụọgụ mgbasa ozi ole na ole ga -enweta nkwenye na ederede na ụbọchị na -abịa.
Elekere asaa nke ehihie (ihe dị ka) - Nyocha Njikere Njikere Flight (FRR) Teleconference Media na Kennedy (ihe na -erughị otu elekere mgbe emechara FRR) ya na ndị sonyere:
• Kathryn Lueders, onye nchịkwa na -arụkọ ọrụ, Ngalaba Nrụkọ Ọrụ Space Operations, Isi ụlọ ọrụ NASA
• Steve Stich, onye njikwa, NASA Commercial Crew Programme, Kennedy
• Joel Montalbano, onye njikwa, International Space Station, NASA's Johnson Space Center
• Holly Ridings, onye isi nduzi ụgbọ elu, Directorate Operations Flight, Johnson
• William Gerstenmaier, osote onye isi oche, Build and Flight Reliability, SpaceX
• Frank de Winne, onye njikwa mmemme, ọdụ ụgbọ elu mba ụwa, ESA
• Junichi Sakai, onye njikwa, International Space Station, JAXA
Mgbasa ozi nwere ike jụọ ajụjụ site na ekwentị naanị. Maka nọmba ịkpọ oku na paswọọdụ, biko kpọtụrụ ụlọ akụkọ akụkọ Kennedy karịa elekere anọ nke Mọnde, Ọkt. 4, na: [email protected]
Elekere 1:30 nke ehihie (ihe dị ka) - Ihe omume mgbasa ozi nke ndị ọrụ bịarutere na Kennedy yana ndị sonyere na ya (nke nwere oke, naanị mgbasa ozi mmadụ kwadoro na mbụ):
• Bob Cabana, onye nlekọta NASA
• Janet Petro, onye ntụzi, NASA's Kennedy Space Center
• Onye na -enyocha mbara igwe NASA Raja Chari
• NASA onye na -enyocha mbara igwe Tom Marshburn
• Onye na-enyocha mbara igwe NASA Kayla Barron
• Onye na -enyocha mbara igwe ESA Matthias Maurer
Enweghị nhọrọ teleconference dị maka mmemme a.
Elekere 7:45 nke ụtụtụ-Mmekọrịta Mgbasa Ozi Virtual Crew na Kennedy ya na ndị na-agụ kpakpando Crew-3:
1 pm-Science Media Teleconference iji kparịta nyocha ndị ọrụ ụgbọ mmiri Crew-3 ga-akwado n'oge ọrụ ha na ndị sonyere ndị a:
• David Brady, onye otu ọkà mmụta sayensị mmemme maka Mmemme International Space Station na Johnson, ga -ewebata mmeghe maka nyocha na teknụzụ dị n'ime ụgbọ elu Crew Dragon.
• Dọkịnta Yun-Xing Wang, onye nyocha dị elu na Structural Biophysics Laboratory na National Cancer Institute, na Dr. Jason R. Stagno, ọkà mmụta sayensị ndị ọrụ na Structural Biophysics Laboratory na National Cancer Institute. Wang na Stagno ga-atụle nnwale Uniform Protein Crystal Growth nke na-achọ itolite nso microcrystals zuru oke na microgravity, nke onye na-ese ihe onyonyo dị ike ga-enyocha ozugbo na nlọghachi ụwa n'akụkụ ndị na-agụ kpakpando Crew-2.
• Dọkịnta Grace Douglas, onye ndu sayensi maka mbọ nyocha NASA's Advanced Food Technology, onye ga -atụle nnwale gbasara nri nri. Nchọpụta a na -amụ mmetụta mmetụta nri nri ụgbọ elu a kwalitere na ahụike ndị na -agụ mbara igwe.
• Dr. Hector Guiterrez, prọfesọ nke injinia na injinia ikuku na Florida Institute of Technology, ga-atụle Smartphone Video Guidance Sensor (SVGS) nke ga-anwale otu mgbama ọkụ LED nke Astrobee na-efe efe na-efe efe ga-emekọrịta ihe n'oge e guzobere. njem ụgbọ elu.
• Onye nnọchite anya nyocha Standard Measures, nke na-anakọta oke nha nke metụtara ọtụtụ ihe ize ndụ ikuku nke mmadụ site na ndị na-eme njem na mbara igwe tupu, n'oge, na mgbe ọrụ ogologo oge gasịrị.
Fraịdee, Ọkt 29
12 pm – NASA onye nchịkwa mgbasa ozi Briefing na NASA TV ya na ndị na-eso ya:
• Bill Nelson, onye nchịkwa NASA
• Pam Melroy, osote onye nchịkwa NASA
• Woody Hoburg, onye na -enyocha mbara igwe NASA
10 pm - Mgbakọ akụkọ mbụ na Kennedy (ihe na -erughị otu elekere mgbe emechara nyocha mmalite nkwalite) ya na ndị sonyere:
• Steve Stich, onye njikwa, Mmemme Ndị Ọrụ Azụmaahịa, Kennedy
• Joel Montalbano, onye njikwa, International Space Station, Johnson
• Jennifer Buchli, osote onye isi ọkà mmụta sayensị, International Space Station Program, Johnson
• Sarah Walker, onye ntụzi ọrụ, Dragon Mission Management, SpaceX
• Josef Aschbacher, onye isi ụlọ ọrụ ESA
• William Ulrich, onye ọrụ ihu igwe, 45th Weather Squadron, United States Space Force
Satọde, Ọkt 30
10pm - Mwepụta mwepụta igwe onyonyo NASA amalite. NASA Television ga-enwe mkpuchi na-aga n'ihu, gụnyere igba egbe, ịkwọ ụgbọ mmiri, oghere oghere na emume nnabata.
Sọnde, Ọkt 31
2:21 ụtụtụ - Mwepụta
Elekere 12:10 nke ụtụtụ - Ịkwọ ụgbọ mmiri
1:50 nke ụtụtụ - oghere oghere
2:20 am - Ememe Ịnabata
Mkpuchi ndụ NASA TV ga -amalite na elekere iri nke abalị Satọde, Ọktọba 10. Maka ozi NASA TV na -agbada downlink, nhazi oge, na njikọ na vidiyo na -enuba.
Mkpuchi ụbọchị NASA nke SpaceX Crew-3 ga-adị na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Mkpuchi ga -agụnye nkwanye ndụ na mmelite blọọgụ na -amalite tupu 10 pm ET na Satọde, Ọkt. Vidiyo nkwanye ọkụ na-achọ na foto nke mmalite ga-adị n'oge na-adịghị anya ebiliri.
Ịga Mwepụta Ọ fọrọ nke nta
NASA ga-enye ndepụta vidiyo dị ndụ nke Launch Complex 39A ihe dịka awa 48 tupu ebuli elu nke ọrụ Crew-3. Na-eche nsogbu teknụzụ na-agaghị ekwe omume, ndepụta ahụ agaghị akwụsị akwụsị ruo mgbe mgbasa ozi mbido ga-amalite na NASA TV, ihe dị ka awa anọ tupu mmalite.